Intengiso yokuziphatha ngokuchasene neNtengiso yoMxholo: Yintoni uMahluko? | Martech Zone
Intengiso yedijithali ngamanye amaxesha ifumana i-rap embi yeendleko ezibandakanyekayo, kodwa akukho nto iphikayo ukuba, xa yenziwe ngokuchanekileyo, inokuzisa iziphumo ezinamandla.
Into yentengiso yedijithali yenza ukuba kufikeleleke ngokubanzi kunalo naluphi na uhlobo lwentengiso yezinto eziphilayo, yiyo loo nto abathengisi bezimisele ukuchitha kuyo. Ukuphumelela kweentengiso zedijithali, ngokwemvelo, kuxhomekeke kwindlela ehambelana ngayo neemfuno kunye neemfuno zabaphulaphuli ekujoliswe kubo.
Abathengisi bakholisa ukuthembela kwiindidi ezimbini zentengiso ukufezekisa oku-intengiso yeemeko kunye nentengiso yokuziphatha.
Intsingiselo eNgemva kweNtengiso yokuziphatha kunye neyoMxholo
Intengiso yokuziphatha ibandakanya ukubonisa iintengiso kubasebenzisi ngokusekwe kulwazi malunga nokuziphatha kwabo kukhangelo lwangaphambili. Oku kwenzeka ngokusebenzisa idatha eqokelelwe kwiiparameters ezifana nexesha elichithwe kwiwebhusayithi, inani lokucofa okwenziweyo, xa isayithi lihanjelwe, njalo njalo.
Le datha isetyenziselwa ukwakha abasebenzisi abaninzi abaneempawu ezahlukeneyo apho iintengiso ezifanelekileyo zinokujoliswa kubo. Umzekelo, ukuba unxibelelanisa iimveliso A kunye no-B, abaphulaphuli bakho abanomdla abanomdla ku-A banokunxulumana no-B.
Kwelinye icala, Intengiso yomxholo ibandakanya ukubeka iintengiso kumaphepha ngokusekelwe kumxholo waloo maphepha. Kwenzeka ngokusebenzisa inkqubo eyaziwa ngokuba kukujolisa kwimeko, equka ukwahlula iintengiso ezisekelwe kwizihloko ezifanelekileyo okanye amagama angundoqo.
Umzekelo, iphepha lewebhu elithetha ngeencwadi linokuba nentengiso yeendondo zokufunda. Okanye iwebhusayithi epapasha iividiyo zokuzilolonga simahla, iindlela zokupheka, kunye neendlela zokupheka zinokuqhuba iintengiso ze-cookware ecaleni kokusebenza kwayo - njani Ukomelela kweBlender ayenayo.
Isebenza Njani iNtengiso yoMxholo?
Abathengisi bomxholo basebenzisa iqonga lemfuno yecala ukubeka iintengiso zabo kumaphepha afanelekileyo.
Ukuseta iiparamitha linyathelo lokuqala. Ngelixa izihloko zizintlu eziqhelekileyo apho intengiso inokungena khona (njengefashoni, ezopolitiko, ukupheka, okanye ukomelela), amagama angundoqo avumela ukujoliswa okuchane ngakumbi phakathi kwezo zihloko. Kwiintengiso ezininzi, ukukhetha isihloko esithile kunye namagama angundoqo angama-5-50 kweso sihloko kufuneka anele.
Emva koko, iGoogle (okanye nayiphi na injini yokukhangela esetyenziswayo) iya kuhlalutya amaphepha kwinethiwekhi yayo ukuze ifanise intengiso kunye nomxholo obalulekileyo. Ukongeza kumagama angundoqo akhethwe ngumkhangisi, i-injini yokukhangela iya kuthatha izinto ezifana nolwimi, umbhalo, isakhiwo sephepha, kunye nesakhiwo sekhonkco kwi-akhawunti.
Ngokuxhomekeke kwindlela umthengisi afuna ukufikelela ngayo, i-injini yokukhangela inokuqwalasela kuphela amaphepha ahambelana namagama angundoqo anikiweyo. Nje ukuba uhlalutyo lugqityiwe, intengiso iya kubekwa kwiphepha le-injini yokukhangela ebonwa ifanelekile.
Isebenza Njani Intengiso Yokuziphatha?
Kuba ukuthengisa ngokuziphatha kuxhomekeke kwindlela yokuziphatha yangaphambili yabasebenzisi, into yokuqala ekufuneka yenziwe ngabakhangisi kukulandelela ukuziphatha. Bakwenza oko ngeekuki, abathi bazifake kwihard drive yomsebenzisi ngalo lonke ixesha umntu endwendwela iwebhusayithi yebhrendi (kwaye ekhetha ukwamkela iikuki).
Iikuki zibanceda babone apho umsebenzisi akhangela khona, zeziphi iziphumo zophando abacofa kuzo, ukuba bandwendwela kangaphi iwebhusayithi yebhrendi, zeziphi iimveliso abazibhalayo okanye bongeza kwinqwelo, njalo njalo.
Ngenxa yoko, banokujolisa kubasebenzisi ngeentengiso ezihambelana nokuba bakwiwebhusayithi okokuqala okanye baphinda abathengi. Abakhangisi bakwasebenzisa iikuki ukulandelela i-geolocation kunye neeparamitha zedilesi ye-IP ukujolisa kubasebenzisi ngeentengiso ezifanelekileyo ekuhlaleni.
Njengesiphumo sokulandela umkhondo wokuziphatha, abasebenzisi banokubona iintengiso zohlobo ebebeluphequlule kwiveki ephelileyo xa befunda iindaba kwi-intanethi okanye bekhangela into eyahlukileyo ngokupheleleyo. Intsalela yomdla wabo wangaphambili okanye inkuthazo efanelekileyo yasekuhlaleni yinto ebakhuthaza ukuba bacofe.
Izixhobo ezininzi ziyafumaneka ukunceda amashishini agcine umkhondo wokuziphatha kwabasebenzisi kwaye ajolise kubo ngeentengiso ngokufanelekileyo.
Yeyiphi eNgcono: ngokwemeko okanye ngokuziphatha?
Kulula ukubhidanisa ezi ndidi zimbini zentengiso, njengoko zombini zibonisa iintengiso ezisekelwe kwizinto anomdla kuzo umsebenzisi. Noko ke, zahluke ngokupheleleyo. Ngelixa intengiso yomxholo isebenza ngokusekwe kwindawo ekhangelwa ngumsebenzisi-ubunjani bomxholo wewebhusayithi, ngamanye amazwi - ukuthengisa ngokuziphatha kuxhomekeke kwizenzo ezithathwe ngumsebenzisi ngaphambi kokufikelela kwiwebhusayithi, njengephepha lemveliso abathe bandwendwela.
Uninzi luthatha intengiso yokuziphatha njengeyona nto iluncedo kwezi zimbini, njengoko ivumela ubunzulu bomntu ngokujolisa kubasebenzisi ngokusekwe kwindlela abaziphatha ngayo endaweni yokudanyaza nje umxholo onxulumene newebhusayithi. Nangona kunjalo, kukho iingenelo ezininzi ezizodwa Intengiso yomxholo ukuba kubalulekile ukuqaphela.
Ukusebenziseka lula -Inzuzo ephambili yentengiso yokuziphatha ilele kwinqanaba lobuqu elinikezelayo. Nangona kunjalo, oku kufuna idatha ebanzi yabathengi kunye nezixhobo ezifanelekileyo zokuhlalutya yona, esenokungafikeleleki kumashishini anezibonelelo ezimbalwa. Intengiso yomxholo ilula kakhulu kwaye ingabizi kakhulu ukuqalisa kwaye ibonelela ngokubaluleka okwaneleyo ukuze ibe yeyona ndlela ibalaseleyo yokutsala abatyeleli besiza. Sele ndiyithethile loo nto, iinkampani zithembele kakhulu kwiikuki zomntu wesithathu ukubonelela ngamava entengiso eyenzelwe wena kubatyeleli bewebhusayithi. Nangona kunjalo, kunye nemimiselo eyongeziweyo kwidatha (GDPR) enokuthi iqokelelwe kwaye isetyenziswe kubasebenzisi, iinkampani ziya kufuna izixhobo ezingaphezulu kunye nesofthiwe yokulawula imikhankaso yentengiso yeemeko njengoko kukho elinye inyathelo elibandakanyekayo, oko kukuthi, ukucela imvume evela. umsebenzisi ukuqokelela idatha yakhe. Ke ngoko, ukuba ufuna ukukhuthaza ukwamkelwa kwedijithali ngokukhawuleza kunye nenqanaba eliphezulu lokuqonda malunga notshintsho olutsha kwiintengiso kwiqela lakho lentengiso, kwiimeko ezinjalo, ukuhamba okusebenzayo kunokudityaniswa nesoftware yakho yentengiso njengendlela yokubaqeqesha.
Umzekelo, unokwakha i-walkthrough ukukhuthaza izikhumbuzo kubathengisi bakho ukuseta iphulo lentengiso kwi-EU. Unokusebenzisa uluhlu lokutshekisha okanye imodyuli ye-microlearning ukunika i-bite-sized-sized pieces of information ukuze bagubungele zonke iziseko ngelixa ubeka umkhankaso kwaye ulandele yonke imimiselo ngokufanelekileyo. Oko kusizisa kwingongoma yesibini.
Ukuba bucala -Izohlwayo zokusebenzisa kakubi ulwazi lomsebenzisi wabucala zinokuba zikhulu. Ngapha koko, iikuki azisazenzekelanga kwiwebhusayithi, kwaye abasebenzisi kufuneka bazikhethele ukungena kuzo, nto leyo eyenza ukuphinda kube nzima ngakumbi. Uyabona, abasebenzisi bafuna ubumfihlo obukhulu, kubandakanya ukukhetha, ukungafihli, kunye nolawulo malunga nendlela idatha yabo esetyenziswa ngayo. Ngokwendalo, i-ecosystem yewebhu kufuneka ihambelane neemfuno zabo ezandayo. Ngelixa iSafari kunye neFirefox sele bezicimile iikuki zomntu wesithathu, uGoogle uyakwenza njalo ngaphezulu kweminyaka emibini. Kodwa ngenxa yokuba intengiso yomxholo ayixhomeki kwiikuki, abathengisi bakho akufuneki bakhathazeke malunga nokungathobeli xa bebonisa iintengiso zabo.
Ukukhuselwa kwesiGaba sesiGaba – Enye inkalo yokhuseleko ngokungathandabuzekiyo kukuthotyelwa komthetho. Nangona kunjalo, isidima sinokuba yinto ekhohlisayo ukukhusela, ngakumbi kuba abathengisi abanakuhlala belawula apho iintengiso zabo zivela khona. Rhoqo, iibrendi ziye zajongana nokubuyela umva ngenxa yokuba iintengiso zabo ziye zadanyaza kwiindawo zabantu abadala okanye ezineembono ezigqithisileyo. Oku, nangona kunjalo, yayisisiphumo sokuziphatha kwabasebenzisi. Ngokwahlukileyo, ukukhangisa kweemeko kubeka iphepha lewebhu kwiziko lezinto, kwaye uphawu lulawula elo phepha lewebhu ngokucacisa izihloko, ii-subtopics, kunye namagama angundoqo ahambelana nesibhengezo.
Ukufaneleka Okungakumbi -Ingcinga esisiseko exhasa intengiso yokuziphatha kukuba abasebenzisi bafuna ukubona iintengiso eziyelelene nentsingiselo ngokubanzi kwindlela yabo yokukhangela. Nangona kunjalo, kuyenzeka ukuba iimfuno zabo zangoku zingangeni kwezo ndlela. Umzekelo, umntu okhangela izixhobo zemidlalo unokungafuni ukubona iintengiso malunga neenkonzo zoyilo lwegraphic, nokuba ebekhe wajonga iinkonzo zoyilo lwegraphic. Ngokwahlukileyo, intengiso ye-organic protein powders inokufaneleka ngakumbi kwimeko yabo yangoku yengqondo kwaye itsale ucofa ngakumbi.
Akukho mngcipheko wobumfama bebhanari Yinto eqhelekileyo leyo apho abasebenzisi baye bafunda ngokungazihoyi iintengiso. Umzekelo, indawo yokubhukisha itikiti bhanyabhanya eqhuba iintengiso zeqonga lokuphonononga bhanyabhanya yenza ingqiqo ngaphezu kokunikezela ngeentengiso ezinxulumene ne-cookware.
Iintengiso ezihambelana nomxholo weempawu ezingaziwayo zikhunjulwa ngama-82% ngaphezulu ngabantu xa kuthelekiswa neentengiso zeempawu ezidumileyo kodwa zingabalulekanga kumxholo wephepha.
Ukongeza, abantu abaninzi abakhululekanga kukulayishwa kweentengiso ezisekwe kumsebenzi wabo wokukhangela wangaphambili. Kukho umbono oqhelekileyo wokubekw' esweni ziinkampani ezinkulu ezinokuthintela abantu ekucofeni iintengiso nokuba intengiso ngokwayo inokufaneleka. Kwelinye icala, intengiso yomxholo ilingana nentengiso kwiphepha lewebhu, iyenza ibonakale ingaphantsi 'njenge-stalker' kwaye inokuthenjwa ngakumbi ukucofa. Xa abasebenzisi bebona iintengiso ezifanelekileyo, ukujongwa kweentengiso kuye kwanyuswa, kwaye kukho ukwanda kwamathuba okucofa okuphezulu.
Ngoku ka Ukunyuka:
Ukujolisa ngokomxholo kumndilili ukunyuka kwe-73% ekusebenzeni xa kuthelekiswa nokujolisa ekuziphatheni.
I-49% yabathengisi baseMelika sebenzisa ujoliso lomxholo namhlanje.
31% of brand isicwangciso ukuba ukwandisa inkcitho yabo kwintengiso yeemeko kunyaka olandelayo.
Yonke imalunga "nomxholo"
Ukuqukumbela, zombini zineendima ezahlukeneyo zokuzidlala kwisicwangciso sentengiso yedijithali, kwaye iibrendi ezahlukeneyo zinokubanika ubunzima obahlukeneyo.
Kodwa kukho amaxesha apho intengiso yeemeko ilukhetho olungcono. Inceda iimpawu ziqalise iphulo elingadingi zixhobo ezininzi zokuphunyezwa ngokugqibeleleyo. Ikwaqinisekisa ukuba akufuneki basebenzise idatha yomsebenzisi okanye bakhathazeke ngokuthobela i-GDPR. Banokuya ngokulula ekujoliseni igama elingundoqo endaweni yoko.
Ekugqibeleni, eyona nto ibalulekileyo kukwazi ukuba ufuna ukuba iintengiso zakho zifezekise ntoni, ufuna ukwenza njani abathengi bakho bazive malunga nebhrendi yakho, kwaye uzimisele kangakanani ukuchitha ukwenza loo nto. Emva koko, yenza ukhetho lwakho - iziphumo ziya kuhlawula ngokuhamba kwexesha.
tags: udidi lwentengisocookie yentengisoamagama angundoqo entengisointengiso yabucalaukufaneleka kwentengisoyongezaicandelo leentengisoUbumfama bebhanileintengiso yokuziphathauphawu lophawujonga imbaliumongoiintengisoIntengiso yomxholoii-advangages zentengiso yomxholoIinkcukacha-manani zentengiso yomxholoukufaneleka blendergdpriintengiso ze-geolocationIintengiso zikagoogle ngokwemekoIintengiso zikaGoogleidilesi ye-ip iintengisoiintengiso zasekuhlaleniKhangela iintengiso